Maitiro ekugadzirisa podcast syncing pane Apple Watch | Ndinobva mac
Maitiro ekugadzirisa podcast syncing pane Apple Watch
Nhasi tichaona mashandisiro atingaite magadzirirwo eepodcast kana edu epamoyo podcast paApple Watch. Iyi sarudzo inonakidza kwazvo nekuti vazhinji vashandisi havagadziri nekuti zvinoita kunge zvakaoma kushandisa, asi hapana chiri kumberi kubva kuchokwadi uye ndiko zviri nyore kwazvo uye nekukurumidza kugadzirisa.
Nezve izvi, zvatiri kuzowana ndezvekuti zvedu zvese kunyoreswa mune yepamutemo Apple Podcasts app Enzanisa ne smartwatch otomatiki uye otomatiki kujekesa mushure mekunge tavanzwa. Izvi zviito zvinoitwa nekukasira uku wachi yedu ichiraja uye nhasi tichaona maitiro ekugadzirisa uku kuenderana.
Gadziridza podcasts neApple Watch
Izvo zvatinozadzikisa neiyi yekuwiriranisa zvakanaka nekuti zvinotibvumidza kuteerera podcasts pane chero Apple chishandiso uye hatifanirwe kutenderera tichidzima avo vakambonzwikwa pawatch, izvi inogadziridzwa otomatiki kusanganisira zvikamu zvitsva iyo yedu podcasters inoramba ichiwedzera. Zviripachena kuti isu tichazokwanisawo kunakidzwa neepodcasts akadhirowewa kuApple Watch yedu pasina kushandisa iyo iPhone.
Izvo isu zvatinofanirwa kuita kuvhura iyo Yekushandisa kunyorera pane yedu iPhone uye tobva tigadzirise ma parameter kune edu kufarira. Kune izvi isu tinofanirwa pinda Clock Yangu uyezve Podcasts sarudzo:
Pano tinogona kusarudza iyo Custom sarudzo mu "Wedzera spied pa" iyo inotibvumidza isu kusarudza ma podcast atinoda kuteerera paApple Watch nemaoko. Zviratidzo nezvikamu mune yako podcast raibhurari zvichawedzerwa uye iwe unogona zvakare kusarudza kana tichida zviziviso kuti tisvike pawachi kana kwete nekumaka bhokisi. Muchidimbu, izvi zvidiki zvigadziriso zvinotibvumidza kunakidzwa nemaPodcast edu atinoda zvishoma zvishoma paApple smart wachi, hongu, tichishandisa yechizvarwa Apple Podcasts app.
Nenzira, iwe unogona kunyorera kune edu masvondo podcast atinoita nevatinoshanda navo kubva kuActualidad iPhone kubudikidza nechisungo ichi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekugadzirisa podcast syncing pane Apple Watch
Zvimwe zvinoratidza nezveAirPower zvinoonekwa pawebhusaiti yeApple, zvoita kuti tifunge kuti vanoramba vachishanda mukusimudzira kwayo
Aya ndiwo maratidziro ayo pane seti yeApple Watch tambo uye kesi yeAirPods kubva kugadziri Nomad